“Mourinho wuxuu joogi doonaa Manchester United, Balse Aniga Ma Aqaano Halka Aan Ahaan Doono”….Wenger – Gool FM
“Mourinho wuxuu joogi doonaa Manchester United, Balse Aniga Ma Aqaano Halka Aan Ahaan Doono”….Wenger
(Arsenal) 30 Abriil 2018. Wenger ayaa sheegay inay layaab ku noqon doonto hadii uu xili ciyaareedka soo aadan uu sii wado shaqada horyaalka Premier League-ga, isagoo dhinaca kale sheegay inuusan wali ka fekerin shaqada uu qaban doono, ka dib ka dhaqaaqistiisa Gunners
Wenger ayaa ka tagi doona Arsenal dhamaadka xilli ciyaareedkan ka dib mudo dhan 22 sano uu ku soo qaatay, wuxuuna Gunners lasoo gaaray guulo muhiim ah oo ay qeyb ka yihiin saddex jeer ee ah horyaalka Premier League ah.
Wenger ayaa hadiyad ka helay macalinkii hore ee Manchester United Alex Ferguson iyo iyo kan haatan leeliya ee Jose Mourinho ka hor inta uusan bilaawan kulankii ay 2-1 guusha ku gaadhay Red Devils, kulankii ka dhacay garoonka Old Trafford.
“Ma garanayo runrii sida ay wax walba u dhici doonaan, Mourinho wuxuu joogi doonaa Manchester United xili ciyaareedka soo aadan, anigana ma garanayo halka aan ahaan doono”.
“Waxaan ka shaqeynayay heerarka ugu sareysa muddo 35 sanno ah anigoon joojin, waxaana qabaa inaan ahay kan kaliya ee sidaas sameeyay, waxaana haatan qaadanayaa waqti aan la hubin, miyaan heli doona nasiino, waxay noqon doontaa layaab hadii aan xili ciyaareedk soo aadan markale an kahor imaado Mourinho”.
“Marka aadan qatar galin, dadku waa ay ku jecel yihiin, waxaan u mahadcelinayaa Manchester United sababtoo ah waxay I gudoonsiiyeen hadiyad wanaagsan, waa markii iigu horeysay ee aan ku guuleysto abaalmarin oo kale”.
Diego Maradona iyo Tababarayaashii ka hoos shaqeynayay oo la wada Ceyriyay iyadoo Hal Kulan xitaa laga adkaan!!
Barcelona oo xalay hanatay La Liga iyo Messi oo dhaafay Mohamed Salah +SAWIRRO